Laabida Weelka Guriga Soo Saarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadda Isku-laabidda Weelka Weelka
Si Fudud Ku Rakibida China 20FT Office Laabista Weelka Guriga ee Iibka
WAALID KELIYA Waa la laalaabi karaa si ay u keydiso qolka marka lagu rakibo weelka maraakiibta. Si kale haddii loo dhigo, hal 40HQ ayaa ku raran kara konteynarro isku laaban oo ka badan kuwa caadiga ah (Cabbirkiisu waa 5800x2450x2500mm markii la laalaabo). Cimrigeeduna wuu ka dheer yahay weelka baakadka fidsan. Weelka noocan ah ee isku laaban sida caadiga ah waxaa loo isticmaalaa inuu ku noolaado gurigiisa sababtoo ah qiimaha tartanka. Cabir 2500X5800X255 ...
Guryaha Weelka Isku-laabma ee La-Laabiyey ee la Fidiyay oo isku laaban guri la sii diyaariyay
1.Folding Container House EXCLUSIVE PATENT Guriga noocan ah ee kontaynarrada wax lagu laabo waxaa loo qorsheeyay sanadkii 2010. Mid ka mid ah macaamiisheena ayaa doonayay xoogaa kaamam ah, wuxuu noo sheegay in qiimaha shaqaalaha dalkiisa ay aad u sarreeyaan, isla markaana uusan khibrad u lahayn rakibidda dhismayaasha. Markaa waxaan ugu tala galnay gurigan isaga. Guriga isku laaban waa la laaban karaa oo la furi karaa marar badan, waxaana si fudud loogu rakibi karaa 10 daqiiqo oo la qaadan karo. Weelka isku laabma prefabricated wuxuu ka samaysan yahay qaab dhismeed bir qafiif ah iyo saanwijyo f ...
New Style Prefab Folding Furnished Weelka Guriga Yar Yar
1.Folding Weelka Guriga QALABKA KELIYA EE WAALIDKA Qolka weelka isku laaban waa dahaarka dhawaqa, dabka, biyaha celiya, ciida-celiya, dabaysha iyo shoogga iyo astaamo kale.Waxaa lagu noolaan karaa si ku meel gaar ah ama joogto ah. jir steel galvanized waa raagaya oo anti-daxalleeyaha, derbiga iyo saqafku waa midabada steel sandwich darfaha, waxay ku fiican tahay dahaadhay, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa lamadegaanka, dhulka cawska, barafka-berg, badda, waa inay ahaataa gabi ahaanba ...
2 Min PrefabricatedPrefab Flat Pack Tiny Portable Mobile Garden Readymade Alwaax Isku Laaban Laabi Laablaab Qolka OfficeHouse
Weelasha la laaban karo ayaa xoogaa horumar ah ka sameeyay guriga weelkiisa caadiga ah. Waa la laalaabi karaa si ay u keydiso qolka marka lagu rakibo weelka maraakiibta. Si kale haddii loo dhigo, hal 40HQ ayaa ku raran kara konteynarro isku laaban oo ka badan kuwa caadiga ah (Cabbirkiisu waa 5800x2450x2500mm markii la laalaabo). Cimrigeeduna wuu ka dheer yahay weelka baakadka fidsan. Weelka noocan ah ee isku laaban sida caadiga ah waxaa loo isticmaalaa inuu ku noolaado gurigiisa sababtoo ah qiimaha tartanka.